Fikarohana momba ny firaisana David Wilcock amin'ny maha-teraka ao amin'ny vatana vaovao an'i Thomas Sugrue, mpanoratra ny "Misy renirano" sy ilay lehilahy nanao an'i Edgar Cayce malaza - Fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao
Walter Semkiw, MD fanadihadiana an'i David Wilcock tamin'ny 2002
Nandany ora maro tamin'ny telefaona aho David Wilcock tamin'ny 2002 momba ny teôriaany fa izy no teraka ao amin'ny vatana vaovao mpanelanelana amin'ny saina malaza Edgar Cayce. Nianarako momba an'i David avy amin'i Joseph Myers, injeniera matihanina izay nanoratra boky momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray Edward Bellamy dia manoratra indray.
Nihaona tamin'i David i Joseph ary nahaliana azy ny filazany fa Cayce izy. Nanohana be i Josefa ary navelany hijanona tao an-tranony nandritra ny herinandro maromaro i David. Tao an-tranon'i Josefa i David tamin'izaho nanana antso an-tariby naharitra niaraka tamin'i David.
Ny fehin-kevitro, rehefa avy niresaka taminy be dia be, dia tsy i Cayce i David, fa azo inoana fa olona nahafantatra an'i Cayce izy. Joseph Myers, teny an-dalana, dia namarana ihany koa fa tsy i Edgar Cayce i David.
Ny zanakalahin'i Edgar Cayce sy ny zafikeliny dia nihaona tamin'i David Wilcock ary nanapa-kevitra fa tsy ny Reincarnation an'i Edgar Cayce izy
Tamin'ny fotoana nanombananay sy i Joe Myers nanombatombana an'i Wilcock dia nandeha tany amin'ny Association of Enlightenment and Research (ARE) ihany koa i David, ilay fikambanana natsangana hizara ny fampianaran'i Cayce.
Nihaona tamin'ny Tale jeneralin'ny ARE, John Van Auken i David, ary nizara ny finoany i David fa izy dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray Edgar Cayce. Andriamatoa Van Auken dia tsy namoaka didim-pitsarana momba an'io, fa nandamina fivoriana naharitra 2 ora nahatafiditra an'i David Wilcock, zanakalahin'i Edgar Cayce ary zafikelin'i Cayce.
Ny fehin-kevitr'ireo mpianakavy Cayce dia i David Wilcock fa tsy ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray an'i Edgar Cayce. Tadidiko ny fanambarana nataon'ny zafikelin'i Cayce fa malemy paika sy manetry tena ny raibeny, mifanohitra tanteraka amin'ny persona David.
Raha hijery ny horonantsary izay nilazalazan'i John Van Auken ny fivorian'ny fianakavian'i Cayce sy David Wilcock, izay niseho tamin'ny 1:10 minitra tao amin'ilay horonan-tsary, dia mankanesa any:
John Van Auken dia nanazava ny fomba nandavan'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana Cayce an'i David Wilcock nitaky ny maha-teraka ny vatana vaovao an'i Edgar Cayce
Fikambanana manan-danja amin'ny lalao tsy mety amin'ny fiainana taloha
Ny mombamomba ny fiainana diso taloha dia mety hitranga amin'ny alàlan'ny antsoiko hoe "fikambanana manan-danja", izay azon'ny olona iray na ny psykika ifantohan'ny olona. Satria ny tena fiainam-piainana taloha dia mety misy olona manjavozavo, ny olona malaza indrindra tamin'izany vanim-potoana izany dia mitsahatra ny misolo tena ny fiainany taloha.
Ohatra, raha milaza amin'ny olona iray ny psykôlika fa Cleopatra izy ireo tamin'ny lasa nofo taloha, dia azo inoana fa tonga nofo ny mpanjifa nandritra ny androm-piainan'i Cleopatra ary angamba nahafantatra azy akory. Cleopatra dia miasa ho toy ny "mari-pahaizana" ara-potoana amin'ny fiainan'ny mpanjifa taloha, na dia tsy Cleopatra ara-bakiteny aza ny mpanjifa.
Raha ny fahitako azy dia izao no nitranga tamin'ny finoan'i David fa Edgar Cayce izy tamin'ny andro taloha.
David Wilcock amin'ny maha-teraka ao amin'ny vatana vaovao an'i Thomas Sugrue, mpanoratra ny tantaram-piainan'i Edgar Cayce
Niara-niasa tamin'ny mpanelanelana amin'ny tontolo malaza Kevin Ryerson nanomboka tamin'ny 2001 aho ary nahita fa nandefa fanahy antsoina hoe Ahtun Re izy, izay afaka manao lalao taloha miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta.
Nandritra ny fotoam-pivoriana niarahana tamin'i Kevin, Ahtun Re dia nanaiky fa tsy i David Wilcock no teraka tao amin'ny vatana vaovao indray i Edgar Cayce ary nambarany fa raha ny tena izy dia i David no teraka tao amin'ny vatana vaovao indray Thomas Sugrue, mpiara-miasa amin'i Cayce izay nanoratra ny tantaram-piainan'ny Cayce mitondra ny lohateny hoe, Misy renirano. Ity boky ity no nampahafantatra an'i Edgar Cayce.
Tamin'izany fomba izany no nisehoan'ny fikambanana manan-danja izay nitarika ny lalao fiainana diso tamin'ny andron'i Wilcock ho Cayce. Niady hevitra momba ireo olana ireo aho niaraka tamin'i David Wilcock sy ilay mpanoratra azy, Wynn Free, talohan'ny namoahan'izy ireo ny bokin'izy ireo nanolotra ny David dia Cayce.
Ny fahasamihafana misy eo amin'i Edgar Cayce sy David Wilcock
Ny teboka iray manan-danja dia i Edgar Cayce izay mpanelanelana amin'ny fahitana izay nandefa hafatra avy amin'ny tontolon'ny fanahy raha tao anaty toe-tsaina misaintsaina. David Wilcock dia tsy mpanelanelana amin'ny tontolo.
Edgar Cayce dia tsy manam-pahaizana ary tsy mpanoratra. David Wilcock dia mpanoratra manam-pahaizana sy mpamokatra.
Wilcock sy Wynn Free dia manamafy fa ny fitoviana amin'ny tabilao fanandroan'ny Cayce sy Wilcock dia manohana ny fikambanan'ny fiainana taloha. Ny marina dia tsy azo ampiasaina ny tabilao fanandroana hanombanana ny maha-marina ny lalao taloha.
Tokony hirehareha amin'ny zavatra vitany tamin'ny zony manokana i David ary irariana ho azy ny tsara indrindra.
Sary ara-panahy sy tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, anisan'izany i Nostradmus
Raha hijerena lahatsoratra iray momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray ao Edgar Cayce, mankanesa any:
Raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao Edgar Cayce
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Mitovy ny endrika tarehin'i Thomas Sugrue sy David Wilcock, na dia toa zokinjokiny sy mavesatra noho i David ao amin'ny sarin'izy ireo aza Sugrue. Mino aho fa hitovy kokoa amin'i Sugrue i David rehefa antitra izy.
Ny firafitr'i David endrika dia tsy mifanaraka amin'ny an'ny Cayce.
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: Mpanoratra ara-panahy navoaka i Thomas Sugrue ary David Wilcock dia mpanoratra manam-pahaizana sy mpamokatra amin'ny lohahevitra ara-panahy.
Tsy manam-pahaizana i Edgar Cayce, ary tsy mpanoratra koa.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Nahita olona tamin'ny fiainany i David Wilcock izay inoany fa tao amin'ny faribolana sosialin'i Edgar Cayce tamin'ny fiainany taloha. Azo inoana fa nisy ny sakaizan'i David sasany nahafantatra an'i Cayce tamin'ny fahatongavany ho nofo taloha satria i Cayce sy i Thomas Sugrue dia mpiara-miasa akaiky, izay nahafantatra olona iray ihany.